China CoSee Anti Fog Magirazi Lens Inoshambidza Liquid Solution Defogger Spray yeMagirazi Emaziso Mugadziri uye Mutengesi | Co-Ona
Magirazi, computer screen, nharembozha, girazi nezvimwewo kuchenesa
1. Anti mhute
2. Isina guruva kugadzirwa kwemusangano
3. Dzivirira bvungapfunga kubva kuma lenzi
4. Hapana chiratidzo chemvura
Mabhodhoro makumi maviri nemashanu mubhokisi repepa, mabhokisi gumi nemaviri ari mubhokisi, mabhodhoro mazana matatu ari mubhokisi
Kuongorora kweAnti-fog Nheyo:
Mirror inodzosera madonhwe emvura. Madonhwe emvura haakwanise kuwedzerwa.
Iyo anti-mhute mvura inonamatira zvine simba kune iyo lens pamusoro mushure mekushandisa.
Anti-fogging mumiriri uye yemvura yekudonha fusion. Deredza kunaya kwemvura pamusoro pemvura.
Kuumbwa kweiyo yakasviba-yakatetepa mvura firimu. Bvisa kudonhedza kwemvura zvakajeka.
Co-Ona Liquid Anti Fog Spray yeGirazi neMota:
Mhute inopesana yakanakira chero nzvimbo yepamusoro uye lenzi yerudzi kubva pamagirazi kusvika kumagirazi kana tsika yakachengetedzwa. Paunenge uchinge waiswa, iwo unozosiya yakatetepa firimu yekudzivirira, ichimisa condensation kubva mukukanganisa malenzi. Co-Ona Anti-fog Spray zvakare inorwisa mabhakitiriya inopedza matinji uye inochengetedza nzvimbo yakachena.
• Kudzivirira kukanganisa uye fogging
• Anti hutachiona
• Dzivirira lenzi nemagirazi
• Yakachengeteka kune angangoita ese marudzi emaziso
Lens Spray Kugadzira Maitiro:
1.Bottle kugadzirwa - zadza mvura
Wuxi Co-Ona kurongedza Co, Ltd. inogadzira yemachira elensi, lens yekuchenesa spray uye mamwe magirazi emagetsi zvigadzirwa muChina. Tinogona kupa imwechete-yekumira sevhisi kune chero epoidiki zvido. Tiri kushandira ezvitoro zvakawanda zvemaziso uye nzvimbo dzemagetsi kwemakore mazhinji. Anopfuura makore gumi 'zviitiko mune ino ndima uye FDA, ISO nezvimwewo Certified Certification uye yakanyanyisa standard.
Ngatirambei tichikwikwidza kwazvo mumusika uripo. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota usazeza kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Pashure: Nyowani Yemafashoni Makuru PC Dhizaina Pilot Mhuno Zambuko Homwe-kunze kweSunglass
Zvadaro: Yepamusoro Yemhando Yakasanganiswa Ruvara Nylon Inogadziriswa Kuverenga Magirazi Cord Neck Sunglasses Retainer Strap
Silicone mhino mapedhi egirazi anti-slip adhesi ...